एमसीसीको विरोध गरौँला तर सम्झौता भइसकेको थप चार सय पचास अर्बको के गर्ने ?
शुक्रबार पौष २५, २०७६/ Friday 01-10-20
ओलीजीलाई पत्याउने हो भने अमेरिकासँग पाँच सय अर्बको सम्झौता भइसकेको छ । पैसा आउन मात्रै बाँकी छ । एमसिसि जम्मा पचपन्न अर्बको हो । एमसिसि जस्ता कम्तिमा थप आठवटा सम्झौता अमेरिकासँग भइसकेको देखिन्छ । एउटा एमसिसिको विरोध गरौँला तर सम्झौता भइसकेको थप चार सय पचास अर्बको के गर्ने ? यो त झन्डै राष्ट्रिय बजेटको चालीस प्रतिशत हुन आउँछ ।
एमसिसीको विरोध गर्ने नागरिक हक तपाईंसँग छ । तर त्यसका निम्ति पढ्दै एटम बमजस्तो लाग्ने भरत दाहालजीले मिहिनेत पूर्वक बनाउनुभएका आफ्नै बुँदा या प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अज्ञानता र हावा स्वभावका कारण दशौं गुना बढ़ाएर प्रस्तुत गरेको फिगर होइन, एकपल्ट सम्झौता आफै पढेर आफ्नै हातले विरोध गर्नुपर्ने कारण र बुँदा टिपोट गर्नुहोस् ।
आर्थिक सहयोग गर्ने्बित्तिकै सेना आइहाल्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त आजभन्दा तीस वर्षअघि नै अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता मुलुक बनेको थियो । एमसिसि त बरु अमेरिकी भए पनि स्वायत्त निकाय हो, अमेरिकी सरकारकै प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग हामीले लिँदै आएका छौं । वसन्तपुर दरबार भर्खर उसैले बनाइदियो । अब सेना त्यहीँ आएर बस्ने भो !
अमेरिका भनेको ट्रम्पमात्रै र नेपाल भनेको ओलीमात्रै होइन । भोलि अमेरिकी सरकारले समेत एमसिसिको दुरुपयोग गर्न नसकोस् र त्यसलाई सैन्य सहायता भनेर राजनैतिक स्वार्थमा बदल्न नसकोस् भनेर तोकेरै कुनै पनि सैन्य गतिविधि र उपकरणमा एक पेन्स पनि खर्च गर्न नपाइने कुरो सम्झौतामैं उल्लेख छ । पूरै खर्च विशुध्द रूपमा आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणमा होस् भनेर प्रशासनिक खर्चको सिलिङ् तोकिएको छ र खर्चका कडा नियम र शर्तहरू राखिएका छन् । एकदम कडा नियम राख्नुको एकमात्र उद्देश्य र कारण दुबै पक्षले यसको दुरुपयोग हातहतियार खरिद या अन्य सैन्य गतिविधि र अपचलनमा प्रयोग गर्न नसकून् भन्ने देखिन्छ । यी शर्त नेपालका लागि मात्रै होइनन् । नरम शर्त राख्ने हो भने पैसा कहाँ पुग्छ भन्ने मैले भनिरहनु पर्दैन ।
भोलि अन्यथा लाग्यो भने जुनसुकै समयमा कुनै कारण नदेखाई नै नेपाल या एमसिसि दुबैले यो सम्झौता तोड्न सक्छन् । एकपल्ट यो आधिकारिक नेपाली भर्सन पढ्नुहोस् । सबै ठीक छ भन्ने होइन । तर कम्तिमा विरोध त तपाईंको आफ्नै र अर्ग्यानिक हुनुपर्यो नि भन्ने हो । हुन सक्छ, जेन्युइन रूपमैं विरोध गर्नुपर्ने अन्य धेरै कुरा तपाईंले भेट्नुहुनेछ तर जे प्रचार गरिएको छ ती भने धेरै जसो कोठामा बसेर आतङ्कित बनाउन आफै रचिएका छन् । पहिलो कमेन्टमा सम्झौताको नेपाली अनुवाद उपलब्ध छ ।
– नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट
बदाम बेचेरै छोरालाई बैंकको जागिर
सरकार कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उद्यत, अख्तियारको दायरा खुम्च्याउँदै
सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको ८० हजार नजिक, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि दक्षिण कोरियाका नेपालीलाई राजदूतावासले गरायो सचेत